Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSinethemba ‘Aunty wama-2000’ Nene, umsakazi womsakazo womphakathi i-Abusekho Ubunzima Christian Radio yaseNewcastle, KwaZulu-Natali - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi ibhange?
Ngaqala ukuba ne-akhawunti yasebhange ngifunda uGrade 11 ngo-2013, (ngayivula) eNedbank.
Uma ukhumbula ebuncaneni bakho, yini owayifunda ngemali?
Wukuthi uma uyibeka iyazala, yande.
Ngaqala ukusebenza ngisafunda enyuvesi ngo-2015 ngenza ama-promotion ezinkampani zotshwala. Umholo wami wokuqala kwakuwu-R75 ngehora. Ngangijwayele ukusebenza ngoLwesihlanu kuya kwiSonto, okwakuthi uma sekubalwa amahora engiwasebenzile kube wuR1 500 ngenyanga.
Ngenzela uMama i-party.
Sengike nganikela esontweni nasebantwini nje. Ngiye ngeseke namabhizinisi abanye abantu noma ngabe wuhlobo lwamabhizinisi engingahlangene nawo.
Ngenza unyaka wesithathu enyuvesi ngasebenza njenge-tutor, okusho ukuthi ngase ngingenelwa yimiholo emithathu uma ngibala owama-promotion noweNSFAS. Ngathi sengiphothule izifundo zami, (kwayikhona) ngibona ukuthi kwakufanele ngiyonge lemali. Loko ngakubona kabi sengihleli unyaka wonke ngingawutholi umsebenzi.
Wukuthi imali iyabuya ngendlela oyisebenzisa ngayo. Ukuyisebenzisa kwenza ukuthi iphinde ibuye futhi kuwena.
Ngingaqala ngokukhokha (imali engiyikweleta) i-UKZN bese ngitshala enye emabhizinisini okwakha, ngithenge namasheya. Ngingathenga nemoto bese ngiyibeka enye.
Ngingathi awabeke imali ngoba awukho umkhakha ongaba nesiqiniseko sokuthi uzosebenza kuwona ingunaphakade, ikakhulukazi lo mkhakha wethu ngoba awunasikhwama sempesheni yomhlalaphansi.